साबधान : आँखा बिगार्ने कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखिन थालेकाले सचेत बनौँ ! जनचेतनाको लागि सक्दो सेयर गरि दिनुहोला – Annapurna Daily
साबधान : आँखा बिगार्ने कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखिन थालेकाले सचेत बनौँ ! जनचेतनाको लागि सक्दो सेयर गरि दिनुहोला
On May 25, 2021 43
काठमाण्डाै – कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका बिरामीको आँखा बिगार्ने म्यूकोर्माइकोसिस अर्थात् एक प्रकारको खतरनाक कालो ढुसीको सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ । भारतमा एक हजारभन्दा धेरैमा यस्तो समस्या देखिइसकेको छ भने नेपालमा पनि सीमावर्ती जिल्लाहरुमा केही व्यक्तिमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।
यो नयाँ रोग भने होइन । तर कोरोना सङ्क्रमितमा यस्तो समस्या के कारणले देखिएको हो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । अहिले जताततै कोरोना, कोरोना भनेको हुनाले यो रोगलाई कोरोनासँग जोडेर हेर्न थालिएको हो ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरुलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । क्यान्सरको औषधि खाइरहेका, मधुमेह भएका र दीर्घरोगीहरुलाई यो रोगको जोखिम रहन्छ ।
यो रोगको उपचार छ । तर त्यो खाने औषधि होइन । स्लाइनपानीबाट लगाउनुपर्ने औषधि हुन्छ । त्यो एकपटक लगाएर ठिक हुँदैन । ६ हप्तासम्म लगाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी गरिने उपचार एकदमै महँगाे छ ।
नेपालमा त्यो औषधि बनेको छैन । बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भारतमा पनि यसको औषधि भेटिएको छैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा उपचार नपाउने अवस्था र पाए पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।
यो रोग लागेमा विभिन्न खालका लक्षणहरु देखिन्छन् जस्तै : आँखा रातो हुने, सुन्निने, आँखा बाहिर आए जस्तो हुने, आँखाको सेतो भाग सुन्निएर रातो हुने हुन्छ । सुरुमा नाकमा त्यसको लक्षण देखिन्छ । नाक बन्द भएर गाह्रो हुने हुन्छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएजस्तो हुन्छ ।
लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले कोरोनाले गर्दा हो या कालो ढुसीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुने भएकाले झुक्किने सम्भावना हुन्छ । आँखा सुन्निएर रातो हुँदा र बाहिर आएजस्तो लागेमा कालो ढुसी भएको हुन सक्छ ।
( आँखा रोग विषेशज्ञ डा. नन्दकुमारी गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)